SANN MAW: Perigee Moon (or) Super Full Moon
Perigee Moon (or) Super Full Moon
ဒီနေ့ 19 March 2011. စနေနေ့ညမှာ ထွက်မယ့် .. လ.. ကနှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း အကြီးဆုံးဖြစ်မယ် ဆုိုပါ့လား။ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပါတဲ့ CNN မှာ ဖတ်လုိုက်ရတယ်။ ဒါကိုလွတ်သွားရင် နောက်တကြိမ်ဒါမျိုးပြန်မြင် ရဖို့ ၂၀၂၉ ထိထပ်စောင့်ရမယ်ပြောတယ်။
တချို့ပညာရှင်တွေကလဲ ဒီလုို အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ လပြည့် ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ဆုိုရင် ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်တတ်တယ်လုို့ပြောကြတယ်။ ဘာလုို့လဲဆုိုတော့ လ.က ကမ်ဘာနဲ့ နီးလာတယ်မဟုတ်လား။ အဲ့လုိုဆုိုတော့ လဆွဲအားကြောင့်
ကမ်ဘာမြေကြီးထဲက ကျောက်လွှာထုတွေကို သက်ရောက်တဲ့ ဆွဲအား များလာလုို့ ဘာညာ၊ ဘာညာ... စသည့်ဖြင့်ပေ့ါလေ၊ပြောကြပါတယ်။
ပညာရှင်တော်တော်များများကတော့ အဲ့လုိုပြောတာ သက်သေအထောက်အထားမလုံ လောက်ဘူးလုို့လဲပြော ပါတယ်။ ဘာလုို့လဲဆုိုတော့ ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေကို ပြန်ကြည့်လုိုက်ရင် ဒီလုိုလပြည့်နေမျိုး မဟုတ်လဲ လှုပ်ခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ် ဆုိုပီး ပြန်လည် ထောက်ပြပြော ဆုိုတာတွေလဲ တွေရတယ်။
ဘာပဲပြောပြော.. အလွန်ကြီးပီး နှစ် ၂၀ လောက်မှာ တကြိမ်လောက် မြင်ရတဲ့ ..လ..ကိုတော့ စောင့်ကြည့် ပြီး၊ အဲ့ဒီလရောင်အောက်.လဟာပြင်..မှာ တီးဆုိုင်ထုိုင်ရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဘီယာလေးစုပ်ရင်း ဘော်ဒါတွေနဲ့ စကားပြောလိုက်၊ အမြည်းလေးစားလုိုက်နေရရင်သော်လည်းကောင်း.. ဒါမှမဟုတ် အုိုမာခရမ်ရဲ့ကဗျာ ထဲကလုိုစာသားနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ချစ်သူတယောက်၊ ဝိုင်တခွက်.ကဗျာတအုပ်နဲ့ လရောင်ဆမ်းတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာ ငြိမ့်လုိုက်ရတယ်ဆုိုရင်လဲ မဆုိုးဘူးနော့်။
ဒီလုိုစိတ်ကူးရင်ပီး တကယ်လုပ်နုိုင်တဲ့သူတွေလုပ်လုို့ရအောင် လက်တုို့လုိုက်တာပါဗျာ။ ကိုယ်တုို့ကတော့ လုပ်နုိုင်သေးပါဘူး၊ လောလောဆယ်တစ် ယောက်ထဲ..ဖုန်းမောင့် တစ်ကုိုယ်ထဲပေါ့ဗျာ။
အားလုံးပဲ လရောင်ခံစား ကြည်နူးနုိုင်ကြပါစေဗျာ။
Anonymous 19 March 2011 at 05:45
sorry for you. OK will make sure I see the moon tonight. Thanks. H
khin oo may 19 March 2011 at 05:45
khin oo may 19 March 2011 at 05:47
မနက်ဖြန်ညလဲကြည့်ရမယ်ဝေ့. စနေနေ့ည. လမ်းပေါ်မှာ ဒန်တန့်တန်.
khin oo may 19 March 2011 at 05:48
Anonymous 19 March 2011 at 13:43
Yeah I've seen it. It's mid night here and shinning so bright.I thought I've seen bigger moon than this before5years ago in Lashio. But this is also pretty big and so beautiful. H
Crystal 19 March 2011 at 14:15
ဟင်း သိပ်မကပ်နဲ့ (လ ကို ပြောပါတယ်)။
Unknown 20 March 2011 at 02:24
ဂျပန်ပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေလို.ဆုတောင်းနေပါတယ်။ဝိုင်၂ပုလင်းဝယ်ထားတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေသွားရင် အိုမာခရမ်ထဲကလိုမျိုးဝိုင်တင်မကပါ ဘီယာပါတိုက်ဦးမယ်။ဂျပန်ကိစ္စအဆင်ပြေဖို.ဆုတောင်းပေးပါ။ :)
Today update news for Japan Nuclear Plant
Three Mile Island (TMI) Nuclear Accident or China ...